Shirkii Taleex Oo Lagu Kala Dareeray, Firxadka Kooxii Qurba-jooga Ee Ka Qaybgalay Oo Berbera Lagu Qabtay, Garaadada Iyo Malayshiyada Ilaalinayay Shirkaa Oo Dhinaca Puntland U Cararay – Araweelo News Network (Archive)
Taleex (ANN) Shirkii kooxda qurba-jooga Sool uga socday magaalada Taleex oo ka tirsan gobolka Sool ayaa gebi ahaanba fashilmay. Kadib markii ay soo waajaheen xaalado cabsiyeed iyo culays kaga yimi dhinaca Xukuumadda Somaliland, taas oo keentay inay kala cararaan kooxihii ka
qaybgalay markii ay saaka ku war heleen in Ciidanka Qaranka Somaliland galeen gudaha magaalada Buuhoodle oo xudun u ahayd malayshiyada nabad –diidka ah ee SSC.
Magaalada Taleex kooxdii shirka halkaa uga socday kaga dhawaaqday maamul goboleed ayaa gebi ahaanba laga gooyay isgaadhsiinta, iyadoo ay adagtahay in si toos ah looga war helo xaalada magaalada iyo sida ay wax u socdaan. Hase yeeshee Sida ay shebekada wararka ee Araweelonews u xaqiijyeen dad ku sugan magaalada Laascaanood iyo deegaamada ku dhow Taleex ayaa xaqiijiyay in lagu kala dareeray shirkaa. Kadib markii laga warhelay dagaalka ka qarxay Buuhoodle ee ay ku qabsadeen Ciidanka Somaliland.
Tibaaxaha iyo wararka ka imanaya deegaankaa ayaa sheegaya in gelitaanka ciidmada Somaliland ee Buuhoodle sii murgiyay xaalada , taas oo saamixi weyday inay kooxdaasi sii wadaan shirkooda, isla markaana khilaafka kooxaha kala siyaasada ah ee marka horeba ka taagnaa ujeedada shirka ayaa qaarkood ku tilmaameen inay kooxda qurba-jooga ee G6 (gudida lixda ah) ee hogaaminaysay shirka wadeen shirqool oo ay Somaliland ugu shaqaynayaan. Kadib markii malayshiyadii xaruntoodu ahayd Buuhoodle shirkaa la geeyay, taas oo ay ku doodeen inay marka horeba ahayd shirqool kooxda G6 wadatay oo fursad siiyay inay ciidamada somaliland galaan buuhoodle.
Waxayna tibaaxaha iyo wararka deegaanka Taleex laga helayaa sheegayaan Tiknikadii malayshiyada Buuhoodle ee Taleex taalay maanta u boqoolaan dhinaca Buuhoodle, iyadoo ay hogaaminayaan ergooyinkii iyo garaadada deegaanka Buuhoodle oo gebi ahanba ka baxay shirkaa, kuwaas oo dhinaca Puntland u baxay, iyagoo doonaya inay Buuhoodle kasoo galaan dhinaca Garoowe, balse sida ay sheegayaan wararka la xidhiidha deegaanka waxa adag inay malayshiyadaasi galaan Buuhoodle, iyadoo ay ciidamada Somaliland ku sugan yihiin halkaa.
Sidoo kale wararka kale ee laga helayo deegaanka Taleex ayaa sheegaya inay kooxo kale oo ka mid ahaa kuwii ka qaybgalay shirkaa u carareen dhinaca Puntland, halka qaar kalena u bexeen dhinaca gobolka Sanaag.
Dhinaca kale qaar ka mid ah firxadka kooxda qurbajooga ee shirka Taleex ka qaybgalay ayaa qaarkood dhinaca magaalooyinka Burco, Berbera iyo Hargeysa usoo baxeen, iyagoo doonaya inay ku laabtaan wadamadii ay ka yimaadeen. Waxayna ciidanka booliska ee magaalada Berbera maanta gacanta ku dhigeen nin ka mid ah kooxdaa oo lagu magcaabo Liibaan Xasan cabdi Axmed, kaas oo laga qabtay madaarka caalamiga ah ee Berbera, isagoo doonayay inuu ku laabto wadankii uu ka yimi. Iyadoo tiro kooxdaa ka mid ahna ay ciidamada boolisku raadinayaan
Published January 15, 2012 By info